Paris Saint-Germain oo markan ku kalsoon inay heshiis cusub ka saxiixan karaan Kylian Mbappe iyo Agaasime Leonardo oo sheegay sababta – Gool FM
Paris Saint-Germain oo markan ku kalsoon inay heshiis cusub ka saxiixan karaan Kylian Mbappe iyo Agaasime Leonardo oo sheegay sababta
Ahmed Nur September 15, 2021
(Paris) 15 Sebt 2021. Mustaqbalka laacibka Paris Saint-Germain ee Kylia Mbappe ayaa wali shaki weyn ku jira iyadoo uu ku jiro xilli ciyaareedkii ugu dambeeyay qandaraaskiisa, haatanse kooxda Faransiiska ka dhisan ayaa kalsooni badna ka muujineysa inay sii heysato xiddigan.
Weeraryahanka 22-sano jirka ah ayaa saddex jeer soo diiday yabooh qandaraas kordhin ah oo uu ka helay PSG iyadoo uu baxsad u ahaa Real Madrid inuu ku biiro xagaagan xilli ay labo jeer ku hungowday dalabaad ay dhiggeeda u gudbisay.
Agaasimaha naadiga Parc des Princess ku ciyaarta ee Leonardo oo horraan qiray inuu Mbappe u diiday heshiis kordhinta inuu doonayo u dhaqaaqista Los Blancos ayaa haatan maankiisa baddelay, waxaana uu sheegay inuu laacibka xawaaraha sare uu sii joogi doono kooxda Ligue 1 ciyaarta isla markaasna uu qalinka ku xarriiqi doono qandaraas cusub.
“Uma jeedo inuu Mbappe tagayo dhammaadka xilli ciyaareedkan, qofna kuma fikirayo mustaqbalka Paris Saint-Germain oo Klian la’aan ah” ayuu Leonardo u sheegay Canal Plus.
Agaasimaha reer Brazil ayaa intaas ku daray inuu laacibka reer France uu xiriir qoto dheer la leeyahay kooxda PSG isla markaasna uusan meel uga dhaqaaqeyn una jirin qof ka walaacsan mustaqbalkiisa.
Si kastaba ha ahaatee, Paris ayaa dadaal dheer ugu jirta sidii ay ku guuleystaha Koobka Adduunka ay ugu qancin lahayd sii joogista caasimadda Faransiiska inkastoo uu bilaash ugu biiri karo kooxdii uu doono marka uu dhaco qandaraaskiisa dhammaadka xilli ciyaareedkan.
Ferdinand warbaahinta horteeda ugu hanjabay macallinka Manchester United ee Ole Gunnar Solskjaer kaddib guuldarradii xalay kasoo gaartay Young Boys
Paulo Dybala oo ka hadlay mustaqbalkiisa xilli uu ballan qaaday in goor dhow uu...